MUSHARAX JAMAAL AFAR XAARAAMOOD AYUU XALAASHAY | Maalmahanews
MUSHARAX JAMAAL AFAR XAARAAMOOD AYUU XALAASHAY
Soomalidu waxay tidhaa hal xaaraan ihi xalaal ma dhasho. Waxa uu inoo yimid Jamaal isaga oo debedda jiray tan iyo inyuu dalkani dhismaayey. Waxuu ina yidhi waxaan rabaa inaan idin xukumo oon madaxweyne idiin noqdo. Waa dhaqn gumeysi oo kale dal aanu waxba gashan hawl busho aanu ka hawl galin aanu taariikhda qadhaadh ee soo martay waxba kala socon, ayuu sida isticmaarka yidhi anaa idiin talinaaya.
Xisbi dhan oo qaran oo xukunka soo qabtay waa UDUB ah ayuu ku furay lacag iyo laaluush kuna burburiyey. Shuruucda xisbiga ee ahayd inay ku tartamaan raga iyo dumarka hormoodka ka ahaa ee dhidibada u taagay ayuu kala tuuray, isaga oo la kaashanaaya Madaxweyne Xigeenkii hore oosifo qabiil ay isku raaceen iyo Maareeyaha Degedda oo dhinaca dhaqaalaha kala socday.
Waa ayaan darro inuu xisbiguu UDUB sidaas ku dumo. Hadda madaxnimada uu u tartamaayaa meeshaba ma taalo oo waxa tartanku yahay Golaha Degaanka, waxuu garan waayey ninka aqoon yahanka ma aqaani macnaha ay sameyso ee isagu titleka ka dhigtay waar bal horta xisbiga soo saar oo ka gudba Ururnimada.
Caqliga UDUB burburiyey waa sharci darada iyo xaaranta uu xisbiga la dul yimid.
Qabyaalad cad ayuu xisbiga ku kala diray iyo lacag xaaraan ah. Waxay ahayd in xabsiga la dhigo sida shuruucda dimuquraadiyada uu uGu tuntay.
Siyaasadda waxuu ka soo qabsaday salaam xaraan ah oo weliba dambi ah ooy tahay in la maxkamadeeyo.
A Jama Burcaatidhi